China 15Khz 2600w Akwa Ike Ultrasonic ịgbado ọkụ Oscillator na Steel Booster rụpụta na ụlọ ọrụ | Qianrong
15Khz 2600w Akwa Ike Ultrasonic Welding Oscillator na Booster Nchara
Ugboro 15 kz
Mmepụta ike 2600 watt
Mkpokọta nkwonkwo M16 * 1
Efere diski Ceramic 60mm
Qty nke seramiiki diski 4pcs
Ngwa Plastic ịgbado ọkụ igwe
A na-akpọ ultrasonic Oscillator ultrasonic vibrator. Ejikọtara ụlọ ọrụ niile na mpi ahụ na mpi a na-akpọ vibrator. Ultrasonic vibrator bụ ngwaọrụ nke na-agbanwe ike eletriki na ike igwe (nke a na-ahụ anya) site na mmetụta pezoelectric nke ceramik piezoelectric, ma na-eme ka mkpuchi ihu na azụ na-acha ọkụ site na nhụjuanya impedance matching.
Ejiri ultrasonic vibrator nwere ultrasonic transducer na mpi ultrasonic. Ultrasonic transducer bụ ngwaọrụ nke nwere ike ịgbanwe ike ọkụ eletrik ugboro ugboro n'ime ike ọrụ. Mpi Ultrasonic bụ ngwaọrụ na-agafe agafe nke na-anaghị ewepụta vibration. Ọ na-agbanwe njupụta nke ntinye vibration site na transducer ultrasonic wee nyefee ya. Mgbanwe mgbanwe.
Etu esi choputa igwe nkpuchi plastik plastic na 20khz na 15khz frequency?
Ugboro ugboro maka igwe ịgbado ọkụ ultrasonic bụ 15khz na 20khz ultrasonic ịgbado ọkụ igwe. Nke dị elu karịa ultrasonic ugboro, nke ka mma ịgbado ọkụ ziri ezi, mana obere ike ikwu, nke ka ntakịrị njupụta. Ndị na-esonụ na-akọwa ọdịiche dị n'etiti igwe na-ekpo ọkụ ultrasonic 15khz na 20khz:
Mgbe ultrasonic ugboro ole dị ala, a na-eme mkpọtụ. Mgbe oge dị ala karịa 20 khz, mkpọtụ na-adị nnọọ ukwuu n'oge ịgbado ọkụ ultrasonic. Maka ngwaahịa plastik nwere ịgbado ọkụ dị elu, nke dị elu karịa oge, nke ka mma. Ya mere, ultrasonic ịgbado ọkụ igwe nke 20khz ma ọ bụ elu adabara nkenke, àjà ihe ọ ultraụ -ụ na-mkpa, nnọọ emebi emebi plastic akụkụ, dị ka SD kaadị, ma ọ bụ ngwaahịa na kristal n'ime ngwaahịa; 15khz ultrasonic ịgbado ọkụ igwe dị mfe na-abawanye ma nwee nnukwu njupụta. O kwesịrị ekwesị maka ịgbado ọkụ buru ibu, siri ike ịgbado ọkụ, ngwaahịa plastik siri ike;
Nke abuo, 15khz na 20khz ultrasonic ebu nha dịkwa ekwekọghị. Ogo nke 15khz ultrasonic ebu n'ozuzu banyere 17cm ogologo, ebe 20khz ultrasonic ebu bụ ihe dịka 12.5cm ogologo.
Ọzọkwa, igwe na-agbazi plastic plastic 15khz nwere ike ịgbanye nnukwu ọrụ ọrụ, na ike nwere ike kewaa 2600w / 3200w / 4200w. Igwe ọkụ 20khz ultrasonic na-ekpo ọkụ bụ 900W - 2000w, ike dị obere, na nha nke ngwaahịa weldable dị obere.
Nke gara aga: Advanced 20Khz 3300w Ultrasonic ịgbado ọkụ Nnọchi CJ20 Transducer na Metal Steel Mpụga Cover
Osote: 20Khz 1500w Ultrasonic ịgbado ọkụ Transducer na Steel Booster ọma jijiji System